Amplifinity: Vahaolana ho an'ny Advocacy amin'ny marika | Martech Zone
Alakamisy Janoary 23, 2014 Alakamisy Janoary 23, 2014 Douglas Karr
Ny fahafenoana dia ahafahan'ny B2B, B2C ary ny Agencies hametraka paikady fanentanana amin'ny marika. Ny tombotsoan'ny programa fanentanana ny marika dia miteraka fanatsarana ny fahazoana mpanjifa, fananganana mpisolovava marika tsy mivadika sy azo idirana ary farany - hitondra ny varotra.
Ny sehatr'asan'izy ireo dia mizara ireto lafiny ifantohana ireto:
Touchpoints ho an'ny mpanjifa - Ny AMP dia mifamatotra amin'ireo lafiny rehetra an'ny mpanjifanay mivantana amin'ireo rafitry ny orinasa - amin'ny alàlan'ny fidirana tokana amin'ny alàlan'ny kaontin'ny mpanjifa, widget na dinika na rohy tsotra.
Programme Advocacy - Ny AMP dia manamora ny fangatahana amin'ny mpanjifanao hanaparitaka ny teny amin'ny anaranao. Ny fampiasana ny pejin'ny kaontiko ho an'ny fanarahana ny asan'izy ireo, ny fivoarany ary ny toerany valisoa, ireo mpisolovava marika dia mifikitra hatrany ary mahafantatra fa sarobidy amin'ny fahombiazan'ny orinasanao.
Efitra fanaraha-maso - ny efitrano fanaraha-maso AMP dia mamela ny marika hanangana, hanara-maso ary hitantana ny Program Advocacy. Ny fahaiza-manao sy ny fanaingoana azy ireo dia manome ny mpanjifa fahaizana mampiasa, manova ary mifehy ny programa misy azy ireo. Azon'izy ireo atao ny manamboatra sy mifehy ny fizarana pejy, ny workflow ary ny fananganana valisoa.
Fampidirana orinasa - Natao ho an'ny fampidirana ny rafitra orinasa, ny hetsika ateraky ny sehatr'izy ireo, manomboka amin'ny referrals ka hatramin'ny varotra mihidy, dia azo ampidirina mivantana amin'ny rafitry ny CRM anao.
Tags: amplifinityfanentanana amin'ny marika
Janoary 23, 2014 amin'ny 3:28 PM